Mayelana NATHI - Linsu Environmental Protection Material Co., Ltd.
"Giqiu" phansi kungokwalabo sha kaLinyi Linsu ukuvikelwa kwemvelo impahla Co., Ltd. inkampani igxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nensizakalo yekhwalithi efanayo ebonakalayo esezingeni lomkhiqizo wepulasitiki. Inesikhungo sayo sokucwaninga, ilabhorethri, ifektri yokukhiqiza, kanye nesistimu yokuthola ikhwalithi ephelele.
Ngokususelwa kufilosofi yebhizinisi ye "ikhwalithi, umkhiqizo nensizakalo", inkampani iyahola kwezesayensi nakwezobuchwepheshe futhi yenza ukuqamba okuhlakaniphile; idala ithimba lomklamo kanye nentuthuko ephezulu embonini, ihlala ithuthukisa futhi ivuselela amaphethini wezimbali; imigqa emibili ehamba phambili yokukhiqiza embala ofanayo enomthamo wokukhiqiza wansuku zonke wamamitha-skwele angama-240000 , isitokwe esime ngamamitha-skwele ayi-600000, uchungechunge lwemikhiqizo engu-18 nezinhlobo ezingaphezu kuka-400 zemibala, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene, ezokwelapha, ezemfundo, ezokuthutha, ezemidlalo, amahholo ombukiso njll.
Le nkampani isidlulile isitifiketi se-3C, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001, i-TUV Rhine eseJalimane ehlola ngokujulile isitshalo. Yonke imikhiqizo yethu isidlulile ukuhlolwa okujwayelekile kwamazwe aphesheya kwe-SGS, kufaka phakathi ukumelana nokugqoka, i-antiskid, i-flame-retardant, i-non-o-benzene, i-formaldehyde njll imikhiqizo yenkampani enekhwalithi yayo enhle kakhulu, ukusebenza okuhle kakhulu kanye nensizakalo yesevisi yangemva kokuthengisa iye yamukelwa kabanzi nokwethenjwa ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Ithimba lethu lobunjiniyela eliqeqeshiwe ngokuvamile lizohlala likulungele ukukusiza ngokubonisana nempendulo. Siyakwazi futhi ukuletha kuwe ngamasampula wamahhala ukuhlangabezana nezidingo zakho. Imizamo emihle kakhulu ingenziwa ukukunikeza insizakalo ekahle nemikhiqizo. Noma ngubani onentshisekelo enkampanini yethu nasezintweni zethu, sicela uxhumane nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usithinte khona manjalo. Ukuze wazi izixazululo zethu nenhlangano. ngaphezulu, ungafika efektri yethu ukuyinquma. Ngokuvamile sizokwamukela izivakashi ezivela emhlabeni wonke ezinhlanganweni zethu.